I-Regis San Francisco ibhengeza ipakethe entsha ethi "Thatha uhambo"
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » I-Regis San Francisco ibhengeza ipakethe entsha ethi "Thatha uhambo"
Culinary • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
I-St. Regis San Francisco, idilesi yenkulumbuso yesixeko yeendawo zokuhlala ezintle, iinkonzo zobabalo kunye nobuhle obungaphelelwa lixesha, ibhengeze umnikelo omtsha wokubonelela abahambi kunye nabahlali abafuna indawo yokuhlala entle kunye namava awodwa amahle, aqabileyo eNapa Valley.
Inkulumbuso yepropathi yaseSan Francisco ibhangise indawo yokuhlala enamava awodwa eNapa Valley e-BRION naseNapa Valley Aloft.
Iphakheji entsha ebizwa ngokuba "Thatha uhambo."
Le phakheji yobutofotofo ibandakanya ukuthuthwa okungahambi kakuhle, izinto ezintle zokupheka, kunye nebhola yomoya eshushu yabucala.
Iphakheji yempahla entsha ethi "Thatha uhambo," ibandakanya ukuhlala ubusuku obunye kwenye ISt. Regis San FranciscoIzikhuselo zodidi lweMetropolitan, ezothutho labucala lokuhambahamba ukuya nokubuya eNapa Valley Bali , amava amahle epikiniki yaseSt. Regis, ibhaluni yomoya oshushu yabucala ngoncedo lwe INapa Valley Aloft, kunye namava abucala, abonisa ukuthandwa kakhulu kwindawo entsha yewayini eNapa, IBHURE.
"ISt. Regis San Francisco ibekwe ngokukodwa kubahambi abanomdla wokufumana ubugcisa beDan Francisco edolophini, inkcubeko yokupheka kunye neyasebusuku kunye nobuhle bendalo, iwayini entle kunye noxolo lweNapa Valley, utshilo uLilian Wagner, uMlawuli weNtengiso kunye neNtengiso. yehotele. "Kuyasivuyisa ukusebenzisana nala mashishini aseNapa Valley ukunika iindwendwe ithuba lokufumana ezona" dolophu "kunye" nelizwe "zibalaseleyo.
Iindwendwe ezibhukisha iphakheji "Thatha uhambo" ziya kuqala ukuhlala eSan Francisco, isixeko esithetha ubabalo, isimbo kunye nenkcubeko. Ekufikeni kwabo eSt. Regis San Francisco, bazakuphumla kwenye yeehotele esele zakhiwe ngokutsha, bonwabele ubuxhakaxhaka bepropathi, kwaye bafumane izindululo kwiqela le-con Cleerge le-Les Clefs d'Or eliza kubenza bazibhaptize ezona ndawo zintle kakhulu, iivenkile zokutyela kunye namaziko obugcisa akummandla we-SOMA (emazantsi e-Street Street).
Kwasa ngengomso, umqhubi wenqwelo-mafutha uya kuba elinde ukuhambisa iindwendwe eNapa Valley, eyaziwa ngamakhulu ezidiliya zayo ezizinzileyo ezisezintabeni kunye nommandla wewayini odumileyo kwihlabathi. Ukuma kokuqala kosuku yiNapa Valley Aloft, emi kwimbali Izindlu zaseYountville. Ekuphumeni kwelanga, iindwendwe ziya kuqala ibhaluni yomoya oshushu yabucala kwaye inyuke phezulu ngaphezulu kwendawo ebonakalayo. Emva kokufika, baya konwaba isidlo sakusasa esenziwe ngepikiniki liqela laseSt. Regis.
Emva koko, iindwendwe ziya entlanganisweni ye-BRION, indawo yokugcina ivenkile yaseNapa Valley evela kumnini Brion Wise ebekwe kwindawo ehloniphekileyo yokuLala iMediliya kuMazantsi edolophu yaseYountville. Ukuzinikela ekuveliseni isidiliya esinye kwiCabernet Sauvignon kunye nokuveza izimvo zikaMnumzana Wise ngokuqokelela iwayini ezincinci ezenziwe ngesandla ezivela kwiindawo ezizodwa zesidiliya eNapa Valley naseSonoma, iindwendwe zingalindela ukonwabela amava ewayini ngaphambi kokuba sibuyele eSt. Regis Esan Francisco.
I-St. Regis San Francisco ibonelela ngamagumbi kunye nama-suites angama-260, onke la ebesandula ukucingelwa ngokutsha yinkampani eyaziwayo esekwe eToronto uChapi Chapo. I-theredesign ikwajolise ekuphuculeni i-St. Regis San Francisco's i-15,000 yeenyawo zenyawo zentlanganiso kunye neendawo zomnyhadala, ukudala iindawo ezihlaziyiweyo, ezentofontofo nezintsha ezenzelwe ukuququzelela incoko nentsebenziswano.
Amaxabiso ephakheji "Thatha uhambo ngenqwelomoya" aqala kwi- $ 12,985.00. Isaziso seentsuku ezili-14 kwangaphambili kuyafuneka ukuba ubhukishe, apho kuya kuthi kuthathwe imali engabuyiswayo, ehlawulelwayo ngokupheleleyo. Imihla yokubala icinyiwe, kwaye ukubhukisha kuyafumaneka ngoku ukuya kuDisemba 20, 2021. Ukubhukisha okanye ukubuza, nceda tsalela isebe lehotele i-Reservations kule nombolo 415.284.4009.
Malunga neSt. Regis San Francisco
I-Guam Visitors Bureau iqala kwakhona iGuåhan Trolley yasimahla...